इन्द्रेणी कसरी पर्छ ? अचम्म र विचित्रका बैज्ञानिक प्रश्नोत्तरहरु - Khabar Nepali
होमपेज / जीवनशैली / इन्द्रेणी कसरी पर्छ ? अचम्म र विचित्रका बैज्ञानिक प्रश्नोत्तरहरु
इन्द्रेणी कसरी पर्छ ? अचम्म र विचित्रका बैज्ञानिक प्रश्नोत्तरहरु
बिजुली किन चम्किन्छ ?
हावा, हुरी र बादलले भरिएको वा वर्षा हुने समयमा आकाशमा बिजुली चम्किएको अनुभव हामीले गरेका छौ । बिजुली चम्किनुको प्रमुख कारण आकाशमा ढाकिएको बादल एक आपसमा ठोकिएर घर्सण उत्पन्न हुनु हो । आकाशमा ढाकिएको कुनै बादलमा घनात्मक उर्जा निस्कन्छ भने कुनै बादलमा ऋणात्मक उर्जा निस्कन्छ । जब घनात्मक उर्जा निस्किएको बादल ऋणात्मक उर्जा भएको बादलसग ठोकिन्छ, तब उनीहरुको बिचमा लाखौ भोल्ट बराबरको बिधुत करेन्ट पैदा हुन्छ । यसरी धेरै भन्दा धेरै करेन्ट पैदा भएपछी बिधुत प्रवाह भइ प्रकाशको रेखा जस्तो उत्पन्न हुन्छ, यसैलाई हामी बिजुली चम्किएको भन्छौ ।
इन्द्रेणी कसरी पर्छ ?
सुर्यको किरणमा सात रङहरु हुन्छन । इन्द्रेणीमा पनि यी सातै रङ हुन्छन । इन्द्रेणी जहिले पनि पानी परेर घाम लाग्नसाथ लाग्छ । यसरी घाम लाग्नसाथ पर्नुको कारण पानी परेको बेला वायुमण्डलमा पानीका सानासाना कण वा वाफहरु रहेका हुन्छन । सुर्यको किरण पानीको उक्त कण वा बाफमा पर्नासाथ इन्द्रेणी परेको देखिन्छ । उदाहरणस्वरूप घाम लागेको बेला हामीले मुखमा पानी हाली त्यसलाई पानीका सानासाना कण हुनेगरी फुरुर्र फुरुर्र पारेर थुक्दा पनि हामीले इन्द्रेणी परेको देख्छौ । यसरी देख्नुको कारण पानीका ति सानासाना कणमा सुर्यको किरण परेकाले हो ।
आकाशमा ढाकिएको कुनै बादलमा घनात्मक उर्जा निस्कन्छ भने कुनै बादलमा ऋणात्मक उर्जा निस्कन्छ । यी दुइ बादल कहिले काही तिब्र बेगले एक आपसमा ठोकिदा त्यहाँ धेरै शक्ति र ताप उत्पन्न भई ठुलो आवाजको साथ् प्रकाशवान आगोको मुस्लो उत्पन्न भई पृथ्वीमा खस्छ, जसलाई हामि चट्याङ परेको भन्दछौ । यस मुस्लोमा ११ हजार भोल्ट भन्दा बढी बिधुतिय करेन्ट प्रवाह हुने भएकोले यो शक्तिले आफ्नो सम्पर्कमा भएका हरेक चिज बस्तुहरु भस्म पारिदिन्छ । बैज्ञानिकहरुका अनुसार संसारमा प्रत्येक मिनेटमा लगभग ६ हजार पटक चट्याङ पर्छ ।
३.माया के हो ? हामीलाई किन आवश्यक पर्छ मायाको ? जान्नुहोस् (मनछुने भिडियोसहित)
४."जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" को अर्थ यस्तो छ !
५.बाख्रा पालन गर्ने सोचमा हुनुन्छ ? यी कुराहरुमा ध्यान दिनुहोस
६.खाना खादा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु : अत्यन्त जरुरी जानकारी